Zuva: Kukadzi 15, 2020
Sarudzo dzeTCDD Vashandi Ünal Karadağ kubviswa pachinzvimbo chake muIzmir uye kutapwa kuenda kuMalatya zvakabviswa nekuda kwekunetsana kwevatariri nenhengo dzeUnited Transport Emp abasebenzies Union. TCDD yakapedza basa rayo muIzmir ndokudzingwa kuMalatya [More ...]
Uraw cosmetics, inoshanda mumunda wezvigadzirwa zvezimhanzi zvinoshandiswa nevakadzi nevarume muhupenyu hwavo hwezuva nezuva uye ine nzvimbo yakakosha mubato iri nekubudirira kwayo munguva pfupi, inopa zvigadzirwa zvayo zvakagadzirwa nenzira dzechisikigo kune vatengi vayo. [More ...]
AnkaraKart kadhi yekufambisa yemadhorobha yaunotakura pamwe newe nguva dzese. Kusaita smart smart makadhi ayo anogona kushandiswa nekuvaswededza padyo nemakadhi ekuverenga makadhi mumotokari dzese dzekutakura vanhu dzakabatana neEGO uye kuverenga kwekadhi kumusoro kwemidziyo iyi. [More ...]
Vagari veDerbent varatidzira kuti iyo Historic Derbent Sitima yeChitima yaisashanda. Nhoroondo Derbent Yechitima Chitima muKartepe, ichienderera ichisimbisa pakati peKöseköy nePamukova neGeneral Directorate of State Railways Management [More ...]
Nhasi muNhoroondo 15 Kukadzi 1893 Anatolian Railway Kambani yakasaina chibvumirano cheAyara-Kayseri naEskişehir-Konya chibvumirano chechitima. Chibvumirano ichi chisati chaitika, vanopikisa veGerman uye Hofisi yeBritain yekune dzimwe nyika vakaita musangano wakasiyana pakati pevaipokana neBritish [More ...]